बेलायतमा फेरि देखा पर्याे अर्को ड-र लाग्दो भाइरस `मन्की-पक्स´, सुरक्षित नरहे ज्या`नै जान सक्ने ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं – Annapurna Daily
बेलायतमा फेरि देखा पर्याे अर्को ड-र लाग्दो भाइरस `मन्की-पक्स´, सुरक्षित नरहे ज्या`नै जान सक्ने ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
On Jun 15, 2021 96
एजेन्सी । संसार को-रोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त भएकाे बेला बेलायतमा फेरि अर्को एउटा नयाँ भाइरस भेटिएको छ जुन भाइरसको नाम हो मंकी-पक्स । बेलायतको नर्थ वेल्समा एकै परिवारका दुई सदस्यमा मंकी-पक्सको पुष्टि भएको छ । सर्वसाधारणमा यसको जोखिमको ख-तरा कम छ । स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार यो भाइरस विदेशबाट बेलायत भित्रिएको पनि दाबी गरेका छन् ।
बेलायतको न्यूज वेबसाइट द वीकको रिपोर्ट अनुसार पब्लिक हेल्थ वेल्सले दुबैजना बेलायत बाहिरबाट संक्रमित भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । यद्यपि, यसबारे जानकारी प्राप्त भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिएकाे छ ।
ख-तरनाक नै हाे त याे राेग ? :- डब्ल्यूएचओका अनुसार यो रोगमा मृ- त्युदर ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यद्यपि, राम्रो कुरा यो हो कि यो बिमिराबाट बचाउने भ्याक्सिन भ्याक्सिनिया मंकी-पक्सविरुद्ध पनि असरदार छ । अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) का अनुसार बिमिराविरुद्ध तयार भएको सिडोफोवीर, एसटी–२४६ र भ्याक्सिनिया डम्यूनि ग्लोबुलिन (भीआइजी) मंकी-पक्समा पनि असरदार रहेकाे छ ।
कस्ता लक्षण देखिन्छ:- यो रोग लाग्दा बि-फ-रको जस्तै लक्षण देखिन्छ । यो रोग लागेपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, कम्मर दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने र कमजोरी हुनेलगायतका लक्षण देखिन्छन् ।
कस्ताे राेग हाे याे ! :- डब्ल्यूएचओ अनुसार मंकी-पक्स जनावरबाट मानिसमा फैलने एक संक्रामक रोग हो । यो रोग धेरैजसो मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी देशमा फैलन्छ र यहाँबाटै अन्य भागमा पनि फैलिएको पाइएको छ । यो रोग संक्रमित जनावरसँग सिधा सम्प-र्कमा आएपछि फैलन सक्छ ।
संक्रमित भएकाे कसरी थाहा पाउने :- यूकेको नेशनल हेल्थ सर्भिसका अनुसार पहिलो पाँच दिनमा शरीरमा बि-मि-रा आउन थाल्छ । सुरुवातमा यो बिमिरा अनुहारमा आउँछन् र त्यसपछि बिस्तारै पूरा शरीरमा फैलन्छ त्यसपछि यो बि-मि-रा रा-तो रङको हुने गर्दछ । अन्त्यमा यो बिमिरामा पा-प्रा लाग्ने गर्छन् । रासस